2012 | IT Sharing Network
တခြားဖုန်းတွေလိုပါပဲ root လုပ်နည်းကလွယ်ပါတယ် ခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ about ဖုန်းထဲမှာတော့ ဖုန်းကိုသေချာအောင်ကြည့်လိုက်ပါအုံး I9305 ဆိုရင်တော့ ကစ်လို့ရပါပြီ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.14 Build3Final လေးရလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman614f.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.14 Build3လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ဗီဒီယိုချက်သမားများအတွက် WebcamMax 7.6.8.8 Multilanguage ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ရုပ်ပြောင်ပုံလေးတွေနဲ့ လန်းချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Keygen + Patch ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.......
microsoft security essentials defination offline install
Microsoft security essentials ကို lasted update ကို Online ကိုဒေါင်းလော့ချရင် အရမ်းကြာတတ်ပါတယ် လိုင်းမကောင်းရင် အဆင်မပြေပါဘူး အဲလိုအဆင်မပြေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် offline update defination လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဖိုင်လေးကို run လိုက်ရုံပါပဲ ခဏလေးပဲ ကြာပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ security essentials လေး Update ဖြစ်သွားပြီဖြစ်လို့ တော်ရုံ
အသစ်ထည့်သွင်းလိုက်သော Facebook privacy shortcuts များအကြောင်း
ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ခု Android Phone တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ထွက်လာပါပြီ။
တော်တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ် virus,cach, တွေ system ဖိုင်တွေကို ရှင်းလင်းပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်ပါ။ အထဲမှာgame speed မြင့်ဖို့လည်းပါသေးပါတယ်။
anti deep freeze ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ deep freeze password remover နဲ့ ပက်ဝက်ကို ဖြုတ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ password remover ကတော့ ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်းမကိုက်ရှင် ဖြုတ်လို့မရပါဘူး anti deep freeze ကို ဗားရှင်းမလိုပါဘူး အားလုံးကို ကစ်လို့ရပါတယ်။ New password ပဲ ပြန်ရေးရေး Password clear လုပ်ပြီးပဲ ၀င်ဝင်
Call Recoder apk လေးကို c-box ကတောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ။ဖိုင်ထဲမှာ သုံးမျိုး ထည့်ပေးထားပါတယ် ။ မိမိနှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
usb drive ထဲက data တွေ ကွန်ပျူတာထဲ ကူးထည့်တဲ့အခါကြာတတ်ပါတယ် အဲလိုကြာတာကို စိတ်မရှည်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ခုနည်းလေးက အဆင်ပြေစေမှာပါ။
ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာမှာ မိမိရဲ့ stick လေးကိုတပ်လိုက်ပါ။
start >> run box ထဲမှာ devmgmt.msc လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် enter ပေါ့နော် အောက်ကပုံလေးအတိုင်းတတ်လာမှာပါ မိမိရဲ့ stick လေးကိုရွေးပေါ့နော်
ပြီးရင် တော့ double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီး policies tab ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Internet Download Manager 6.14 Build2Final Portable လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အဆင်ပြေအောင် Portable ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... Double Click နှိပ်အသုံးပြုယုံပါပဲ... အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... AutoCAD လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Applied AutoCAD 3D Modelling By Robert TinAye ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထာပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Applied AutoCAD Drafting 2D 2009 By Robert TinAye
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... AutoCAD လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Applied AutoCAD Drafting 2D 2009 By Robert TinAye ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထာပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... U Aung Myint ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Autocad 2005 By U Aung Myint စာအုပ်ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Autocad လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်... အရင်က “Workgroup” AotoCAD & 3ds Max Job Training Center မှ ပညာဒါန အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ Learning AutoCAD2010 ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Autocad လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေကြပါစေ.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာဖော်ပြပေးထားပြီး Minus နှင့် Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... ဂိမ်းဝါသနာရှင်များအတွက် Bad Piggies v1.1.0 ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အရင်တခါလည်း တင်ပေးဖူးလို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားလို့ အပြည့်အစ ကစားနိုင်ကြမှာပါ... ဒေါင်းလော့ဖိုင်ထဲက Assembly-CSharp.dll ကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Rovio\_Bad Piggies\_BadPiggies_Data\_Managed ထဲကို ထည့်ပေးရပါမယ်.... ကစားလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... ၀င်းဒိုး Update လုပ်လိုက်လို့ Activate မဖြစ်တော့တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ၀င်းဒိုး လုပ်တာ 2.1.8 + WAT Fix လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ........ ရာမညဖိုးလပြည့် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ CSS အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..... CSS အကြောင်းလေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထာပြီး Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကိုနေစေး ရေးသားထားတဲ့ G-Talk ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... G-Talk အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိသင့်တာလေးများကို စုံလင်အောင် ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
Internet and Data Security (ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ဘာကြောင့်ပျောက်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... KHT - khtnetpc@gmail.com (www.khtnetpc.webs.com) ရေးသားထားတဲ့ Internet and Data Security (ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ဘာကြောင့်ပျောက်) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..... ဒီစာအုပ်ကလေကို Internet အသုံးပြုသူတိုင်း သိထားဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပြီး ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အခုတစ်လောာ Facebook မှာ ကိုယ့်အကောင့်သူများသုံးသွားတာတို့၊ အကောင့်ပျောက်တာတို့ တော်တော်များများကြားနေရပါတယ်။ Facebook တင်မကပါဘူး တစ်ခြား Gmail, Yahoo စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လောလောဆယ် လူတိုင်းနီးပါးခံရပြီး အလွယ်သုံးနိုင် အသုံးများတဲ့ Hacking နည်းတွေကို ပြောပြပါ့မယ်။ အနီးစပ်ဆုံးသိထားရင် သတိထားရှောင်ကျည်နိုင်တာပေါ.။ ၁။ ဆိုင်ရှိကွန်ပျူတာတွင် Password ကျန်ခဲ့ခြင်း ၂။ Phishing သုံးပြီး Hack ခြင်း ၃။ သာမာန် Keylogger သုံးပြီး Hack ခြင်း ၄။ အဆင့်မြင့် KeyLogger သုံးပြီး Hack ခြင်း ၅။ Social Engineering အထက်ပါ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်ခြေရှေိတဲ့ Password ပျောက်ဆုံးခြင်းအကြောင်းတွေကို ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထးပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dopbox , Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... Networking ကိုလေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Networking Edition ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... မှီငြမ်းကိုးကားစာစောင်များကတော့ - Microsoft Network Essential Edition 3. - Network + David Groth And Tim Catura - Network, Data Base Security And Standardization . Japan Information Technology Engineers Examination Center - Hand On Training Of U Wai Lin Kyaw (MCF). တို့ကို မှီငြမ်းရေးသားထားသည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ.... စာမြည်းဖတ်နိုင်အောင် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်း သိထား ဖတ်ထားသင့်တဲ့ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများ စာအုပ်ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အရမ်းကိုများလို့ ရေးမပြတော့ပါဘူး အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ နမူနာစာရွက်တွေမှာသာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ၀ဏကျော် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ လက်တွေ့အသုံးချ Digital Video လေ့လာမှုလမ်းညွှန် စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Video editing အကြောင်းကို ယခုအပတ်ကစပြီးတော့ အပတ်စဉ် video editing ရဲ့ သီအိုရီ တွေကစလို့ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သင်ခန်းစာရဲ့အမည်ကို Post Production လို့ အမည်တပ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ လူသိများတာက Special Effect သင်တန်းကို လူသိများပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗီဒီယိုတွေမှာ ကွန်ပျူတာအကူအညီနဲ့ editing လုပ်မယ်၊ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ ထည့်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ရန်ကုန်လောကသား တော်တော်များများနဲ့ ပြည်သူလူထုတော်တော်များများက Special Effect လုပ်ငန်းစဉ်တွေလို့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးခြောက်နှစ်ကတည်းက မှတ်ယူလာခဲ့တာပါ။ ဘာလို့ Production လို့ခေါ်ရသလဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုမှာ အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ Pre Production ရယ်၊ Post Production ရယ်၊ ဆိုပြီးတော့ အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ Production ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က ထုတ်လုပ်ရေးလို့ အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြပေမယ့် Producer ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ ထုတ်လုပ်ရေးမှုးလို့ အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရပါမယ်။ ရန်ကုန်မှ poducer ကို ငွေအရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်သူလို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။ ဒီ ထုတ်လုပ်ရေးမှုးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသံလွှင့်ဌာနတွေ ဖြစ်တဲ့ မြ၀တီ၊ မြန်မာ့အသံတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ Producer တွေဟာ အများအားဖြင့် အမျိုးသမီး တွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Producer တစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ဟာ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခုလုံအတွက် သူဟာတာဝန်ယူပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ ရိုက်ညွှန်းရေးသားတဲ့နေရာ၊ ရိုက်ကူးတဲ့နေရာ၊ တည်းဖြတ်ပြီးတော့ အချောသတ် မီဒီယာတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအထိ အားလုံးကို နားလည်နေမှ သူဟာ Producer တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကလေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကတော့ INTRODUCTION...... ANALOG EDITING NATURES (LINEAR)..... DIGITAL EDITING (NON-LINEAR) ........ VIDEO COMPRESSION ..... TIME CODE ...... IMAGE & RESOLUTION.... PIXEL ..... DPI & RESOLUTION ....... DATA TRANSFER RATE ..... STORAGE MEDIA & DATA RATE...... MUSIC DIGITAL AUDIO FOR VIDEO....... PREPRODUCTION.... SONY DVD HANDYCAM ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်သံများရယူခြင်း ..... ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရန် HARDWARE နှင့် SOFTWARE ရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်း ...... ADOBE PREMIERE PRO CS3ဖြင့် စနစ်တကျ ရုပ်သံဖမ်းယူခြင်း ..... SONY VEGAS PRO9ဖြင့် ဗွီဒီယို တည်းဖြတ်ခြင်း ........ ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ! HD … လား ၀င်ခဲ့လေကွယ် ....... ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ! HD … လား ၀င်ခဲ့လေကွယ် (၂) ..... ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ! HD … လား ? ၀င်ခဲ့လေကွယ် (၃) ....... စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်.... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အာကာဖြိုး (နည်းပညာ) www.akarphyoe.com ရေးသားထားတဲ့ Blog site အလှဆင်ခြင်း စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Blog ရေးသားမည့် သူများနှင့် Blog စတင်လ်ုပမည့် သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
Making Myanmar WordPress Blog Handbook (မြန်မာလို)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... Making Myanmar WordPress Blog Handbook (မြန်မာလို) စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... WordPress အသုံးပြုသူများနှင့် လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်..... WordPress ဆိုတာ လူသုံးအများဆုံး Blogging Software တစ်ခုပါပဲ။ Open Source ဖြစ်တဲ့ WordPress ရဲ့ သုံးရလွယ်ကူမှု၊ Fully Customizable ဖြစ်မှု၊ မရေတွက်နိုင်တဲ့ Themes များစွာ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှု နဲ့ WordPress ရဲ့ အဓိက Power ဖြစ်တဲ့ အမျိုးမျိုးသော Plugin ပေါင်းများစွာ သုံးစွဲနိုင်မှု တွေက Pro Blogger အများအပြားကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ဘလော့ဂ် တည်ဆောက်ရာမှာလဲ WordPress နဲ့ အခက်အခဲ မရှိ ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ WordPress အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် WordPress.com မှာ အကောင့် ပြုလုပ် ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း (Blogger.com ကဲ့သို့) ၊ ကိုယ်ပိုင် Hosting သို့မဟုတ် Free Hosting တွေမှာ တည်ဆောက် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ အခမဲ့ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ Beginner များအတွက် လွတ်လပ်ပြီး Fully Customize ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ WordPress Blog တည်ဆောက် အသုံးပြုခြင်းနဲ့ အခြေခံ Wordpress, Plugins, Themes အကြောင်းများကို တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ အခန်း(၁) ။ ။ WordPress ဘလော့ဂ် ပြုလုပ်တည်ဆောက်ခြင်း (၁) Hosting နှင့် ဒိုမိန်းနိမ်း (၂) DNS update ပြုလုပ်ခြင်း (၃) Freehostia ၏ Elefante Fee Scripts ဖြင့် WordPress Install ပြုလုပ်ခြင်း (၄) WordPress manual installation ပြုလုပ်ခြင်း အခန်း(၂) ။ ။ Changing WordPress Setting (၁) Profile and Personal Options (၂) Setting / Permalinks အခန်း(၃) ။ ။ WordPress Themes နဲ့ မြန်မာစာ (၁) မြန်မာဖောင့် Assign ပြုလုပ်ခြင်း (၂) WordPress Theme ပြောင်းခြင်း အခန်း(၄) ။ ။ Plugins စသည်တို့ပါဝင်ပြီး ပြည့်စုံအောင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထာပြီး လေ့လာလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... သံလုံငယ် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Change Mac Address စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... wifi ဖောက်သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်.... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... သံလုံငယ် ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Change CPU Information စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... နမူနာပုံမှာ ပြထားသည့်အတိုင်း Dual-Core ကနေ Core2Quad ပြောင်းလည်းထားခြင်းမျိုးကို သိရှိရှောင်ရှားနိုင်စေရန်နှင့် ကွန်ပျူတာ ၀ယ်ယူတဲ့အခါ CPU လိမ်အရောင်းမခံရအောင် ဗဟုသုတရစေရန် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်.... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... မောင်စေတနာ ပြုစုရေးသားထားတဲ့ ဘလော့အချက်အလက် စာအုပ် ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..... Blog အကြောင်းစတင်လေ့လာနေသူများနှင့် ရေးသားနေသူများအတွက် အထူးအသုံးဝင်မည့် ပေါင်းချုပ်သဖွယ် ပြုစုရေးသားထားသော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ပြည့်ဖြိုးမောင်မောင် ( B.C ( Tech ) ( Hons ) ) MCTS , MCPD . Web site : http://myanmaraspnet.multiply.com မှရေးသားထားသည့် .Net 2.0 Fundamental စာအုက်ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... .Net 2.0 fundamentals အကြောင်းကို မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ရေးသား ထားပြီး Asp.net 2.0 ကို စတင်လေ့လာမည့်သူများ အတွက် အခက်အခဲ မရှိစေရန် လိုတိုရှင်း ထိမိစွာ ဘာသာပြန် မျှဝေပေးထားပါသည် ။း ပါဝင်သည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ CHAPTER 1 - 1.1 .Net Framework 1.2 Structure of .Net Application 1.3 Asp.Net & C#.Net 1.4 Asp.Net Versions 1.5 Client Server Architecture 1.6 Type of Applications create with Asp.Net 1.7 Event Flows of Asp.net Application 1.8 Event Flows of Asp.net Page 1.9 Asp.Net File Types - CHAPTER2- 2.1 Master Page 2.2 Content Page 2.3 Web Server Controls 2.4 Asp.Net Special Folders 2.5 Data Bound Controls 2.6 Tracing Key - CHAPTER3- 3.1 Data Types 3.2 Variable Declaration and Assign 3.3 Constructor 3.4 Method and Parameters 3.5 Operator 3.6 Function and Variable Scope 3.7 C# Data Type Convertions 3.8 Statements 3.9 Loops - CHAPTER4- 4.1 Validators 4.2 Web User Control, Custom Control, Composite Control - CHAPTER5- 5.1 State Management Technologies - CHAPTER6- 6.1 ADO.Net စသည်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... မစ္စတာ.မောင်ဘစ်နေ ရေးသားထားသော အခြေခံ Hacking နည်းပညာစာအုပ် ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး အမေးများနေတဲ့ Trojan, kaylogger, Folder Background ကို software မသုံးပဲ ပုံလှလှလေးထည့်နည်း, Gmail Password Hack နည်း နှင့် Folder ကို software မသုံးပဲ Lock ချနည်း စသည်တို့အပြင် ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ Introduction: ဟက်ကာဆိုတာဘာလဲ နှင့် ကျွန်ုပ်၏ အမြင် အပိုင်း (၁) : လိုအပ်သောအရည်အခြင်းများ အပိုင်း (၂) : Hacker တို့၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ Intro ……….Trojan Horse ဟုခေါ်သော virus အကြောင်း …………ဟက်ကာတွေအသုံးပြုသော လျှို့ဝှက် အရာများ ………..Port Scanning ………..SubSeven ……….NetBus အပိုင်း (၃) : Gmail Password Hack နည်း …………..Phishing အကြောင်း Intro အပိုင်း (၄) : Phishing နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ gmail password ဖောက်နည်း အပိုင်း (၅) : Windows ကိုဝင်မွှေနည်း တိုလီမုတ်စများ ………. Registry သို့ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ခြင်း ……… Folder ကို software မသုံးပဲ lock ချနည်း နှင့် Funny Command ရေးနည်း ……… Cmd Dos Command နည်းနည်းပါးပါး ……… Folder Background ကို software မသုံးပဲ ပုံလှလှလေးထည့်နည်း ……… website တွေ့ရဲ့ IP ကိုချက်ချင်းသိချင်တယ်ဆိုရင် စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံအောင် ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်... စာမြည်းဖတ်နိုင်အောင် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
Internet Download Manager 6.14 Build 1 Final (patch, crack, serial မလိုပါ)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... IDM 6.14 Build 1 Final Update လေးရလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ IDM ကတော့ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ယုံနဲ့ အမြဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်... patch, crack, serial မလိုပါဘူး.... မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကို မင်းစိုးရာဇာ ရေးသားထားတဲ့ Hacking ဗဟုသုတ (XSS,DDOS,Hacker & Cracker) စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Hacking နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကို သိသလောက်ပြန်လည် မျှဝေထားပါတယ် စာအုပ်ထဲမှာ အဓိက ရေးသားထားတာတွေကတော့ XSS,DDOS,နဲ့ hacker & cracker တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကွာခြားချက်တွေကို ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်... အောက်မှာ အမြည်းအရင်ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးထားပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
WinTools.net ( Premium, Proffesional, Classic, Ultimate )
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ၀င်းဒိုးကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် WinTools.net ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ၀င်းဒိုးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေတော်တော်များများပါဝင်ပြီး Uninstaller, Scan Files, Scan Reg, Start Up, Dup Files, Tweak UI စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်.... ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tools တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် www.wintools.net မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Premium, Proffesional, Classic, Ultimate ကြိုက်နှစ်သက်ရာလိုင်စင် ထည့်သုံးနိုင်အောင် Keygen ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire, Dropbox နှစ်နေရာ တင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Malware တွေကို အကောင်းဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Malwarebytes Anti-Malware ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်ခုပြောပြချင်တာက Antivirus တစ်မျိုးမျိုးတင်ထားရင် လုံလောက်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ... ယခုကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ Kaspersky Internet Security 2013 တင်ထားပါတယ် SUPERAntiSpyware တင်ထားပါတယ်... အခုထပ်ပြီး Malwarebytes Anti-Malware တင်လိုက်ပါတယ်... သိစေချင်တာက သုံးမျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာကိုပါ... FB မှာလည်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မေးထားပါတယ်... Antivirus နဲ့ AntiSpyware နှစ်မျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ရလားတဲ့... တင်သုံလို့ရယုံတင်မဟုတ်ပါဘူး တင်သုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆိုတာ ဆိုက်ပေါင်းစုံ ၀င်ကြတာများပါတယ်... FB မှာလည်းလင့်တွေက အမျိုးမျိုးစုံရှယ်နေကြတာပါ... အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Malwarebytes Anti-Malware လေးကိုသုံးကြည့်ပေးပါ Pro ဖြစ်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်.... မိမိစက်မှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ Malware တွေနဲ့ တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Malware တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်... Malware ရှိနေတဲ့ဆိုက်တွေကို ၀င်မိရင်ရှိကြောင်းကို ညာဘက်အာက်ခြေနားမှာ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်... ဒီကောင်လေး တင်ပြီးသွားရင်လည်း Update ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးပါ... Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ... အရင်တင်ထားပြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ software လေး Run ပေးလိုပ်ယုံနဲ့ Pro ဖြစ်သွားမှာပါ...
P-Apps V 1.2 ( Make your software to be Portable Software)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Software တွေကို Portable ပြုလုပ်လို့ ရတဲ့ P-Apps ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Portable ပြုလုပ်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် software နှင့် အသုံးပြုပုံ video ဖိုင် နှစ်ခုစလုံးတင်ပေးထားပါတ်ယ်... P-Apps ကို ဒေါင်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Video ဖိုင်ကလေးကိုကြည့်ပြီး အဆင်ပြေပြေပြုလုပ်နိုင်မှာပါ... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Avast အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Avast 2050 Activator ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... 2050 အထိဆိုတော့ Avast အသုံးပြုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်တော့ အတော်အသုံးဝင်မယ့် Activator လေးတစ်ခုပါပဲ.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox, Zippyshare, Sharebeast, Box လေးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Windows Expert Tool 4.5.0 For Recover all Passwords in Windows OS
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... Password တွေကို ပြန်ရှာဖို့အတွက် Windows Expert Tool 4.5.0 For Recover all Passwords in Windows OS ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ Password တွေကတော့ တော်တော်များပါတယ်... အသေးစိပ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါတယ်... 32 / 64 နှစ်မျိုးစလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ GOM Player 2.1.47 Build 5133 Final ကို Mediafire မှာတင်ပေးပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....GOM Player – A very powerful multimedia player. It includes numerous features that ensureahigh level of play. With GOM Player you can play even damaged or not completely downloaded / copied AVI files. GOM Player supports all modern video and audio formats such as video mobile phones and digital cameras as well as playback of online content directly from the network.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Facebook ဘယ်လို ဟတ်မလဲ (မြန်မာလို) စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို နည်းပညာစာအုပ်များစွာကို မျှဝေပေးနေတဲ့ ကီးကီး မှပြုစုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်... နမူနာကြည့်နိုင်အောင် တရွက်ချင်းတင်ပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Backtrack5ကိုအသုံးပြုပြီး Network တစ်ခုမှ တစ်ခုကို လှမ်းပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပုံကို ရေးသားထားတဲ့ Buffer OVerflow (မြန်မာလို) စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Buffer Overflow ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့။ Network တစ်ခုမှ တစ်ခုကို လှမ်းပြီး ထိန်းချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်...ဒီအခုတင်ပေးတဲ့စာအုပ်လေးက မြန်မာလိုလေးလည်းဖြစ် ပြီးတော့ အခြေခံကျကျလေးလည်း ဖြစ်အောင်ကို Z3r0 0r H3r0 က ရေးသား ပေးထားတာ မို့တကယ် ဖတ်ရတာကောင်းပြီး လေ့လာရလွယ်ကူပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆီအနှစ်အရသာ ကို ခံစားမိမှာပါ။ စက်တစ်လုံးကနေ တစ်ခြားတစ်လုံးကို ဘယ်လိုတွေ ထိန်းချုပ်မယ်။ ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် စတဲ့ အကြောင်းတွေပါပါသေးတယ်. အသုံးပြု့ သွားတဲ့ OS ကတော့အ ခု နမည်ကြီးနေတဲ့ Backtrack5rs3 (BT5) ကိုသုံးသွားပါ... Backtrack5အသုံးပြုနည်းကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... လေ့လာလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် dorpbox, minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Malware တွေကို အကောင်းဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Malwarebytes Anti-Malware ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်ခုပြောပြချင်တာက Antivirus တစ်မျိုးမျိုးတင်ထားရင် လုံလောက်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ... ယခုကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ Kaspersky Internet Security 2013 တင်ထားပါတယ် SUPERAntiSpyware တင်ထားပါတယ်... အခုထပ်ပြီး Malwarebytes Anti-Malware တင်လိုက်ပါတယ်... သိစေချင်တာက သုံးမျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာကိုပါ... FB မှာလည်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မေးထားပါတယ်... Antivirus နဲ့ AntiSpyware နှစ်မျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ရလားတဲ့... တင်သုံလို့ရယုံတင်မဟုတ်ပါဘူး တင်သုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆိုတာ ဆိုက်ပေါင်းစုံ ၀င်ကြတာများပါတယ်... FB မှာလည်းလင့်တွေက အမျိုးမျိုးစုံရှယ်နေကြတာပါ... အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Malwarebytes Anti-Malware လေးကိုသုံးကြည့်ပေးပါ Pro ဖြစ်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်.... မိမိစက်မှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ Malware တွေနဲ့ တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Malware တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်... Malware ရှိနေတဲ့ဆိုက်တွေကို ၀င်မိရင်ရှိကြောင်းကို ညာဘက်အာက်ခြေနားမှာ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်... ဒီကောင်လေး တင်ပြီးသွားရင်လည်း Update ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးပါ... Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...